Ihe mmanu Amaranth
Mmanụ a na-eme site na ịpị mkpụrụ osisi na-ama aka (ma ọ bụ ihe mgbanyụ, nke na-adịghị echebara ya echiche ogologo oge dị ka ahihia) bụ isi iyi nke ihe bara uru na ezigbo ejiji maka ọka. Taa anyi na - acho ihe mmanu mara nma ma na esi eji ya eme ihe.
Njirimara ọgwụgwọ nke mmanụ amaranth
A na-ahụpụta ngwaahịa a site na nnukwu ọdịnaya nke bekee bara uru, nke gụnyere:
abụba fatty (mono- na poly-jupụta);
Potassium, ígwè, ọla kọpa, phosphorus, magnesium, calcium.
Njirimara bara uru nke mmanụ amaranth bụ n'ụzọ dị ukwuu n'ihi ọdịnaya nke antioxidants ndị kachasị ike: vitamin E na squalene - na ngwaahịa a, ha nọ n'ụdị tocotrienol nke na-adịghị ahụkebe na karịsịa.
Mmanụ site na mkpụrụ nke amaranth na-eme ka usoro ịka nká gbadaa ngwa ngwa, na-ewusi usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ, na-eme ka cholesterol dị ala, na-egbochi nsị ụta na mkpịsị ọbara, mmepe nke mbufụt.
Ọgwụgwọ na mmanụ amaranth
A na - akwado ọtụtụ ndị dọkịta na - agwọ ọrịa amaranth, ọ bụrụ na ị:
Ọrịa nke akụkụ eriri afọ - mmanụ na-agwọ ọnya na ọnyá.
Nsogbu nke usoro obi obi - adịghị ekwe ka e guzobe ihe oyiyi atherosclerotic, na-eme ka ọbara mgbali, ọsọ, ike na ụda nke obi.
Nhụjuanya na ọrịa dermatological - nwere mmetụta na-agwọ ọrịa, anaghị ekwe ka fungi, nje bacteria, nje na-etolite, na-eme ka mmeghachi omume nke mmekọrịta dị ngwa.
Anamia - mmanụ amaranth na-akwalite njikọ nke hemoglobin.
Ọrịa nke akpịrị , oghere uzo - nwere mmetụta bactericidal.
Ibu oke na ọrịa shuga - eme ka abụba dị mma, na-achịkwa ọkwa glucose.
Ọrịa gynecology - na-agwọkwa mmiri, na-egbochi mbufụt, na-eme ka ọdịdị nke hormonal gbasaa.
Ọrịa nke usoro ụjọ ahụ , nchekasị, isi ọwụwa, ọrịa uche - na-akpali mmepụta nke acetylcholine na serotonin.
Ọrịa na-ekpuchi ọrịa - nwere ihe ndị na-akpata radioprotective na anticarcinogenic.
Kedu otu esi ewere mmanụ amaranth?
Maka prophylaxis, a na-aṅụ mmanya ahụ ugboro abụọ n'ụbọchị maka 1 teaspoonful n'oge nri (tupu eri nri, mmanụ dị na vial ahụ kwesịrị ịma jijiji). Oge nke ọnwa 1. ọ kachasị mma ịmegharị na mmiri na mgbụsị akwụkwọ.
Iji gwọọ mmerụ ahụ, a na-ete mmanụ na-ama ama n'ime ebe ndị mebiri emebi ugboro abụọ n'ụbọchị, na-ewepụ ihe fọdụrụ nke akwa akwa ahụ.
Iji dọkịta na-eme ihe dị ka ọgwụ kwesịrị kwadoro ya. Ke adianade do, mmanụ amaranth nwere contraindications:
cholelithiasis ma ọ bụ urolithiasis;
pancreatitis (nnukwu, nke na-adịghị ala ala);
onye ekweghi ekwe.
Mmiri Amaranth dị mma maka igirigi - nri ahụ na-esi ísì ụtọ ma ghara ọkụ.
Amaranth mmanụ na cosmetology
Ngwurugwu na-agwọ ọrịa, mmanụ amaranth na - enyere aka na herpes, scars, acne, ntachu.
A na - ejikwa ngwaahịa ahụ:
maka ịhịa aka n'ahụ cellulite;
dị ka onye nchebe megide ụzarị ultraviolet;
dịka ihe nkpuchi.
Iji nọgide na-acha akpụkpọ anụ ma na-eto eto, ihu ihu ihu na-esonụ ga-enyere aka: mmanụ na-ama ama (1 spoonful) jikọtara ya na ụrọ anụcha (1 ngaji) nke a tụgharịrị n'ime mmiri. Echere Kashitsu n'ihu ihu maka minit 15. Tinyegharịa usoro ahụ nwere ike ịbụ 1 oge kwa izu. Ọ dịkwa uru itinye mmanu ahụ na ngwakọta nke mmanụ amaranth na ihe ọṅụṅụ lemon (nke ọma).
Kedu esi esi nri mmanụ ama ama n'ụlọ?
Enwere ike ịzụta ngwaahịa ahụ na ahịa ọgwụ, ma ị nwere ike ime ya n'onwe gị. Ị ga - achọ:
mkpụrụ nke amaranth (ahọrọ, 1 n'arọ);
mmanụ olive (nke mbụ, 1.5 l) ;
Nkwadebe nke mmanụ amaranth na-amalite site n'ịkụcha mkpụrụ osisi na frying pan. Mgbe ahụ, a na-etipịa ha na kọfị kọfị, a na-awụnye ntụ ọka mmanụ n'ime karama mmanụ mmanụ, nke a gwakọtara nke ọma, kpuchie ya na mkpuchi. N'izu atọ na-esonụ, a ga-eme ka karama ahụ maa jijiji (1 oge kwa ụbọchị). A na-etinye ngwaahịa ugbu a site na gauze na-adọkpụ, a na-echekwa mkpuchi na ebe gbara ọchịchịrị.
Dandelion - uru bara uru na contraindications
Mgbọrọgwụ Badan - ọgwụ ọgwụ na contraindications
Ịdị ọcha - ọgwụgwọ ọrịa
Kedu otu esi eto osisi ero?
Chokeberry - ọgwụ ọgwụ na contraindications ị na-amaghị banyere
Juniper tomato - ọgwụ Njirimara na contraindications
Ọgwụgwọ ntu nail na ọgwụ ndi mmadu
Cedarwood - ngwa
Obere Nutị Na-acha Ncha
Ụgwọ ọgwụ ọjọọ nke Badger
Efere nke yabasị husks - ọma na ihe ọjọọ
Fennel - ọgwụ Njirimara na contraindications
Mgbidi na-adịghị mma n'ime ụlọ ahụ
Ọfụma ọbara n'ime ụmụaka bụ ihe nkịtị
Na-acha akwụkwọ ndụ na-akpụkpọ anụ
Mkpebi nke ovulation na basal okpomọkụ
Akpu mmiri Aquarium
Karịa ịgwọ rhinitis na-egbu ahụ?
Ọgwụ cholecystitis na - enweghị atụ - mgbaàmà na ọgwụgwọ ọrịa dị egwu
Mkpụrụ ọka mkpụrụ osisi okpomọkụ
Ụzọ a ga-esi na-aga n'okporo ámá maka ụlọ ezumike
Sarah Rei gosipụtara igbe dị n'ahịrị na-ere ahịa ya
Obere ntutu isi maka ihu oval
Agbanwe ụgbọ mmiri maka ala
Ọrịa na - arịa ọrịa - ọ bụ ya, ihe mgbaàmà na mgbaàmà ya
Rubella na ụmụaka - mgbaàmà
Ụdọkọwa ahụ na-agwụ
Kedu ihe ụmụ nwanyị na-eme?
Blow n'ime plexus anyanwụ
Ogige nke Orthodeic maka ụmụ akwụkwọ
Njipu ezé bụ ihe niile ị chọrọ ịma banyere usoro ahụ
Kedu otu esi mepụta ncheta dị ebube?